သပိတ်စုံ သူပုန်ထ General Strike | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » သပိတ်စုံ သူပုန်ထ General Strike
သပိတ်စုံ သူပုန်ထ General Strike
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 23, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 51 comments
ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန် အလုပ်သမားသပိတ် အင်အားသုံး အဖြိုခွဲခံရသဗျ။ သပိတ်စုဝေးမှုခြင်း တူပါလျက် ကျောင်းသားကြ လက်ခံထားပြီး အလုပ်သမားမှ ဘာကြောင့် နှိပ်ကွပ်သလဲ..။ (၁) ချီတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပြတာ ဖြစ်မယ် (၂) ကျောင်းသားနဲ့ အလုပ်သမား ပေါင်းမိသွားမှာ ကြောက်ပုံရတယ် (၃) ဒါကတော့ အဓိကထင်တယ်… ပြည်သူလူထုနဲ့ မပေါင်းမိလို့။
ဘပြောင်စစ်တပိုင်းအစိုးမရ အပေါ်ယံကြော ဟန်ပြ လိမ်စား လှည့်စားနေတယ်။ ယုံသူကလည်းယုံဆဲ ဆိုတော့ ခံပေါ့။ အသိညဏ်နဲ့ ခွန်အား ပြိုင်တဲ့အခါ တွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲပါပဲ။ အလုပ်သမားအရေးကိုကြည့်လိုက်.. ဒီလောက် နည်းတဲ့လုပ်ခကို ကာကွယ်သူ၊ မသိကျိုးကျွန်ပြုသူ မနည်းတာ တွေ့ရမည်။ စီးပွားရေးသမားတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေက လုပ်ခပိုပေးရတာမကြိုက်၊ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အသံဆို မကြားချင်။ အလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းက ရနိုင်သမျှ ပိုလိုချဉ်မယ်… ဒါ သဘာဝ.. အပြစ်တင်စရာမဟုတ်။ အလုပ်ရှင် အများဆုံး လိုက်လျောနိုင်တဲ့ ပမာဏနဲ့ အလုပ်သမား အနိမ့်ဆုံး လက်ခံနိုင်တဲ့ ပမာဏ ဆုံချက်မိသွားတဲ့အခါ ပြေလည်သွားမည်။ အဲလို မဟုတ်လို့တော့ ဘယ်လောက် ဖိနှိပ်ဖိနှိပ်၊ ခြိမ်းခြောက် ခြိမ်းခြောက် သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆက်ရှိနေမည်။ အလုပ်ရှင်ကလည်း ဘယ်လောက်ပဲ ဆန္ဒအပြခံရရ တကယ် ချောင်ပိတ် မမိသ၍ မပေး။
အလုပ်သမား တောင်းဆိုချက် များသလား..။ မထင်ပါ… တလလုံး နားရက်မယူလုပ်လျင်တောင် ခုနှစ်သောင်း၊ ရှစ်သောင်း..။ အခြားခံစားခွင့်လည်းမရှိ။ အခြေခံလစာဆို တလမှ လေးသောင်းဝန်းကျင်.. လူတယောက် ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ယုံထက်မပို။ ခုလစာနဲ့ဆို တနေ့၁၂နာရီ ၁၄နာရီလုပ်၊ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကြက်ဥလေးကြော်၊ ငါးပိရည်တို့စား၊ ပြီးတော့ ညမအိပ်ခင် အိမ်ထောင်ရှိလျင် အဝှာပြု.. အိပ်.. ခူး..ခလော။ နိုးလာ ထမင်းဘူးပြင် အလုပ်သွား။ ဒါနဲ့ သံသရာလည်… ဘယ်မှာလဲ လူ့ဘဝ။ အိပ်၊စား၊ကာမ လုပ်ယုံပဲဆို တိရစ္ဆာန်သာသာ ဘဝပေါ့။ အလုပ်ရှင်များ၊ သူဌေးအောက်ဆွဲများ၊ ငါ့တဘို့ထဲသမား မြင်ကြဖို့ပါ။
မြန်တျန့်ပြည် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေသည် စီအမ်ပီ လက်ခစားစနစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ အပ်ထည်အရေအတွက်လိုက်လို့ လက်ခရတယ်။ အပ်သူနိုင်ငံပေါ်လိုက်လိုက် အမြတ်အစွန်းကွာခြားမှုရှိတယ်။ ဂျပန်နဲ့အနောက်တိုင်းဈေးကွက် ပို့နိုင်သူ ပိုကျန်တယ်။ WTO ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အတူ off shore manufacturing ခေတ်စားလာတယ်။ အစပိုင်းတော့ တရုတ်နဲ့ မက္ကဆီကိုဖက် ဦးတည်တယ်။ အဲဒီကုန်သွယ်မှု အစပိုင်း ၉၀ခုနှစ်လောက်မှာ အာဆီယံဖက်ရောက်လာတော့ မလေးဝံဂျီးချုပ် မဟာသီက ပူညံပူညံလုပ် ကန့်ကွက်သပေါ့။ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီ စီးပွာရေးနယ်ချဲ့မှု ဘာညာကွိကွ.. ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဗီယက်နမ်၊လော၊ကမ္ဗောဒီးယားနဲ့ မြန်တျန့်လို့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပြောင်းစ နိုင်ငံတွေကို ဗိုလ်ကျလို့ရမှန်းသိတော့ ဒင်းလည်း ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ဝင်တီးတာ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ..။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှာ လက်ခစားပေး အပ်တာနဲ့ပက်သက်လို့ အကြမ်းမျဉ်းပြောမည်ဗျာ… အာဆီယံမှာ မြန်တျန့်လုပ်ခ အပေါဆုံး (ဂုံယူလိုက်စမ်း)။ ယူအက်စ်မှာလုပ်လျင် အလုပ်သမားခ ဆယ်ဆ ပိုကြီးမည်။ ဒီတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အဆက်အသွယ်ရှာ၊ တတ်နိုင်လျင် ကိုယ်တိုင်ရှယ်ယာဝင် စက်ရုံထောင် ဒါမှမဟုတ် ကန်ထရိုက်အပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ကန်ထရိုက်အမြတ်၊ အခြားပေးရကမ်းရ ကုန်ကျစားရိတ်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင် လခမြက်မြက်လေးယူ.. ယုံကြည်ရသူ လုပ်တတ်သူကို လခကောင်းကောင်းပေး၊ စက်ရံလည်ပတ်စားရိတ်၊ နောက်တော့ အလုပ်သမားကို အနိမ့်ဆုံးရအောင်ညှစ်.. ။ လခတိုးတောင်းလျင် မကိုက်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားဖောက်သည်က တိုးပေးမည် မဟုတ်ကြောင်း ခိုလိုညည်းပြတာ ထုံးစံ။ လုပ်မနေနဲ့.. အဲဒီ အလုပ်ကို အပ်သူကိုယ်တိုင် ရှယ်ယာပါထားတာ မမေ့နဲ့။ အမြတ်ကို ဟိုမှာတခါ ဒီမှာတခါ နှစ်ခါယူထားတဲ့ သဘောကို မြင်အောင်ကြည့်ဖို့ပြောတာ။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်လည်း အလုပ်သမားခ ဆယ်ဆသက်သာထားတဲ့ပစ္စည်း ပြီးတော့ စက်ရုံစက်ပစ္စည်းကုန်ကျစားရိတ်မရှိမို့ အမြတ်margin လျော့သွားတာပဲရှိမည်။ အလုပ်ရှင် ချမ်းသာ၍ အလုပ်သမား မချမ်းသာနိုင် သို့သော် စားဝတ်နေရေး ဖူလုံရမည်.. ဒါက အခြေခံ အကြောင်းတရား..။
အလုပ်သမား တထောင်ရှိလို့ တယောက် ၃၀၀၀၀ တိုးပေးလျင် တလသိန်း၃၀၀ ပိုသွားမည်ဆိုလည်း သူတို့ဟိုမှာ ရထားတဲ့ ဈေးနဲ့များစွာ တန်သေး၏။ တိုးတောင်းတဲ့အခါ လုပ်တတ်တာ နိုင်ငံခြားအလုပ်အပ်သူက ပြည်တွင်းပါတနာ (သို့)ကန်ထရိုက်တာကို ရာခိုင်နှုန်းပိုပေးပြီး လခတိုးမပေးရအောင် (သို့) အနည်းဆုံးတိုးပေးရအောင် လုပ်ခိုင်းမည်။ ပြည်တွင်းပါတနာ (သို့) ကန်ထရိုက်တာကလည်း ပိုလာတဲ့ငွေ အိပ်ထဲထည့်ပြီး အရိုးအရင်းလေးစွန့်ပေးဖို့ကြံမည်။ နိုင်ငံခြားအလုပ်ရှင် (သို့) ပြည်တွင်းကန်ထရိုက်တာဖက်က အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းကို မလျော့ခြင်သ၍ ပြသနာ မပြေလည်။ ဒါဆို လခတိုးပေးရလို့ စက်ရုံပိတ်ထွက်သွားမလား။ မဖြစ်နိုင်… ပြောပြီးပါပြီ.. သူတို့ရတဲ့ အမြတ်အစွန်းသည် အခြားမှာ ပြောင်းရှာမရအောင် ကြီးသည်။ ဒီတော့ တွန်းမပို့သ၍ ကုတ်ကတ်တွယ်နေမည်။
မပေးလိုလျင် ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် ရှိရမည်။ တနှစ်ဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ၊ အကောက်ခွန်၊ ဝင်ငွေခွန် ဘယ်လောက် ဆောင်သလဲ။ စာရင်းစစ်ဘယ်သူလဲ။ စက်ရုံမှတ်တမ်းနဲ့ အစိုးရကိုတင်တဲ့ မှတ်တမ်းတိုက်ကြည့်။ အကြမ်းမျဉ်းအားဖြင့် သိနိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ အဲလိုအချက်အလက်မျိုး လူတိုင်းကို ထုတ်ပြဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ အလုပ်သမား သမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်များ ကော်မတီဖွဲ့ စစ်တယ်၊ အတည်ပြုတယ်၊ ညှိနှိုင်းတယ်။ အဲလိုမှ မလုပ်ခြင်ရင် အလုပ်သမားတောင်းဆိုိတဲ့ လခပေးပါ။ ဘာလို့လဲ အလုပ်ရှင်ဖက်က လိမ်နေလို့၊ လိမ်တာမှ အစိုးရကိုလည်းလိမ်တယ်၊ အခွန်ထမ်းပြည်သူကိုလည်းလိမ်တယ်၊ အခွန်ဆောင်လုပ်ငန်းအခြင်းခြင်းကိုလည်း လိမ်တယ်။ နိုင်ငံဒေါ်သစ္စာဖောက်မှု၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု… အောင်မငှီး ပြောရင်း ကြက်သီးထလာပြီ။
လှုပ်ရှားမှ မုန့်စားရမည် ရဲဘော်တို့
လူထု ထောက်ခံမှု အရယူ၊ ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့ ပေါင်းနိုင်လျင် လမ်းစရှိသည်။ စက်မှုဇုံမှာတင် ပိတ်မနေနဲ့.. လမ်းပေါ်ထွက်ကြ၊ အခြားစက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုဇုံများနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အထွေထွေ သပိတ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲကြ။ အဲလို လုပ်ပြနိုင်မှ ဒင်းရို့ အူယားဖားယား ပြေးကပ်လာလိမ့်မည်။ လေးစားရကောင်းမှန်း သိမည်။ လက်ရှိအနေအထားမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဆင့်လောက်နဲ့ လျှိုထားတယ်။ ပြီးသွားတော့လည်း ဘပြောင်အစိုးမရ မျက်နှာမပျက်၊ ပိုကြီးလာတော့လည်း ဘပြောင်စေတဏှာဆိုပြီး နာမည်ကောင်းယူ စေ့စပ်မည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းအစိုးရအဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှ အလုပ်သမားတိုက်ပွဲ မျှော်လင့်ချက်ရောင်နီသမ်းမည်။
လုပ်အားထွက်ကုန်က အာဆီယံအဆင့်ပင် မမှီဆိုလျင် အာဆီယံစံနှုန်းနဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဘာများလုပ်ပေးဖူးပါသနည်း။ အလုပ်သမား ဥပဒေက တဖက်စောင်းနင်း..၊ လုပ်ခအရမ်းနည်းကြောင်း လက်ခံတယ်.. ဒါပေမဲ့ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ မသတ်မှတ်နိုင်.. အစိုးရကြောင့်လား လွှတ်တော်ကြောင့်လား ဘာမှ မဟုတ်ဘူး ဗိုလ်သမ်းရွှေ မပြောသေးလို့… နိုင်ငံရေးပါပဲ။ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ ဥပဒေ မသတ်မှတ်သ၍ အလုပ်ရှင်က နည်းမျိုးစုံသုံး ရှောင်နေဦးမည်။ သတ်မှတ်လည်း တိကျရမည် ပြင်းထန်ရမည်။ အလုပ်သမားကြတော့ ထောင်ဒဏ်၊ အလုပ်ရှင်ကတော့ ငွေဒဏ်တသိန်း.. မတရားမှုကတော့ ကမ်းကုန်နေပြီ။ အင်တာနက်မှာ ဖွတ်အောက်ဆွဲ၊ စစ်လမ်းနီးတွေနဲ့ သူသေကိုယ်သေ လေကြောင်းတိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲတော့ တေ၈ါင်က ဘာပြောလဲဆို ကြိုက်မှလုပ် မကြိုက်လျင် မလုပ်နဲ့တဲ့။ ဘာလို့ အဲဒီ အသိညဏ်မဲ့ ရိုင်းပြတဲ့ စကားထွက်သလဲ။ အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ မရှိလို့ ကိုယ်ခြင်းမစာပြောထွက်တာ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီစကား ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းသလဲ သိပုံမရ၊ မရဆို နိုင်ငံတဂါ အတွေ့အကြုံမရှိ.. ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာနေတဲ့ ဖွတ်မျုိးဖြစ်မှာပေါ့။ မြန်တျန့်ပြည်မှာ အခုတောင်းနေတဲ့ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာက ဥရောပနဲ့ ယူအက်စ်မှာ ရခဲ့ပြီးပြီ။ အာဆီယံမှာ မျိုးဆက်တဆက် ခံစားပြီးပြီ။ ဒါကိုမှ ရူးခြင်ယောင်ဆောင်နေတာဆိုလျင်ဖြင့် တိုက်ယူဖို့ကလွဲ အခြားမရှိပြီ။
.ကျု ပ်လည်းအလုပ်သမားတွေအတွက် ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့လို့ အထည်ချုပ်လောကကထွက်လာတာ…
.နေ့စဉ် မနက် ၇နာရီကနေ ည၉နာရီထိ …အော်ဒါအချိန်မီအောင်အသားကုန် အိုတီခိုင်း…ဒါတောင်အိမ်ပြန်ပါငွေ တစ်လ တစ်သိန်းမကြော်ရင်တော့…ဘယ်လိုရပ်တည်ကြမလဲ
သပိတ် မှောက်လည်း မြှောက်ပေး
သပွတ်အူပွ လည်း မြှောက်ပေး
ဒီ ကြောင်တော့ ရွာ့ပြင်ထွက်ရတော့မယ်။
မပူနဲ့ ကြောင့် နောက်မှာ ကျနော် ရှိတယ်။
.အူးကြောင် ပြောတာမှန်တယ်…..။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လစာက သက်တမ်းကြာတဲ့သူတောင်… အများဆုံးက ၁သိန်းခွဲတဲ့….။ လွှတ်တော်ထဲကလူတွေကတော့ သမ္မတတောင် မသိလိုက်ဘူး…၊ လက်ဝါးရိုက်ပြီး လစာတိုးပြီ…..
အူးကြောင် ပြောတာမှန်တယ်…. ဟုတ်တယ်….ချ….ချ…
လူအများနဲ့ လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာ အခက်အခဲအများကြီး ရှိပါတယ်။
အမြတ်အစွန်းများတဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင် အဲဒီအလုပ်ကို လုပ်ငန်းရှင်တွေအများကြီး ၀င်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။
အမြတ်အစွန်းများမများဆိုတာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေ ပိတ်သွားကြတာကိုသာကြည့်ပေတော့။
လုပ်ခနဲ့တန်အောင် စွမ်းအားပြည့်ရော လုပ်ကြရဲ့လားဆိုတာ သုံးသပ်ကြည့်ကြဖို့ လိုသေးတယ်။
အဲလိုမျိုး ပြောသံဖတ်ရတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အလုပ်သမားတဦးကို မလိုအပ်ဘဲ မခန့်ထားပါ။ လူတဦးတိုးတိုင်း ထွက်ကုန်တိုးတာ ငြင်းမရ။ လုပ်ခနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွဲဖက်ညီဖို့ဆိုတာ လက်ခံတယ်.. ဒါပေမည့် ဘယ်လို တိုင်းတာမလဲ။ တကယ် ရိုးသားလျင် ဘယ်လောက်ဝင်သလဲ ဘယ်လောက်မြတ်သလဲ.. အလုပ်သမားခနဲ့ ဝင်ငွေ၊ အလုပ်သမားခနဲ့ အမြတ်ငွေ အချိုးချကြည့်တာ အသင့်တော်ဆုံး မဟုတ်ပေလား။ ဘယ်လိုလဲ လေရဲမိုးအမ တီမားမား.. အထည်ချုပ်ပိုင်ရှင်တွေ လုပ်ဝမ့်ဗမား..
ဂယ်တော့ အဆိုးရ အသုံးမကျလို့ ဘာ။
အလုပ်ရှင် လုပ်ပိုင်ခွင့် စည်းကမ်း
အလုပ်သမား အခွင့်အရေးအတွက် ဘာမူမှ မရှိ။
ရှိသလောက်မူကိုလည်း အဆင့်မမြှင့် နဲ့
ကြာတော့ အဖက်ဖက်က ယိုယဲပြီး ဂလို တွေဖြစ်လာတာ။
မှန်ကန်တဲ့ မူချမှတ်နိုင်တဲ့ အစိုးရ တစ်ရပ်ဖြစ်အောင်သာ တောင်းဆိုကြပါ။
(ဘာလာလာ ဆစ်အဆိုးရ ကို ဆွမ်းကြီး ဝင်လောင်းတာ အေးရော)
၀င်ငွေကနေ အလုပ်သမားခ(ပုံမှန် နေ့စားခ+OTအပြင် +အထည်ကြေး+ရက်မှန်ကြေး+++အဲဒါတွေပါမှ အလုပ်ကို ပီပြင်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်)၊စက်ရုံငှားခ၊စည်ပင်လိုင်စင်၊အမှိုက်ပစ်ခ၊မီတာခ၊မီးစက်ခ၊ရုံးလုပ်ငန်းစားရိတ်(စာရွက်စာတမ်း၊Copier,fax,e-mail, oversea and inland phone charges ၊Computer ,printer ,scanner …..)၊ဖယ်ရီကားခ၊အစားအသောက်ကျွေးခ၊စက်ပစ္စည်းSpare parts လဲခ(အသစ်ဝယ်ရတာမပါ)၊ဘဏ်စားရိတ်(ငွေလွှဲခ၊Export earning ကနေ ကျပ်ဖြစ်အောင် ပြန်ဖော်ရတဲ့ ပုဒ်မလေး- ပေးမှလုပ် စားရိတ်)၊Customs ပေးရတဲ့ ပုဒ်မလေး-ပေးမှလုပ် စားရိတ်၊ ကုန်သွယ်ရေးမှာ ပုဒ်မလေး-ပေးမှလုပ် (အားလုံး အ၀င်တခါ အထွက်တခါ စားရိတ်)၊လိုင်စင်ကြေး၊မီးသတ်၊ရပ်ကွက်/မြို့နယ်သာရေးနာရေး အလှူ အမည်ခံ ဆက်ကြေး၊လူမှုဖူလုံရေးကြေး၊အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ်တဲ့အခါ ဆေးခန်းစားရိတ်၊သင်တန်းပို့ရတဲ့ စားရိတ်၊အမှားအယွင်းတွေအတွက် လျော်ကြေး၊………..အဲဒါတွေကို ဘယ်အချိုးထဲ ထည့်တွက်မလဲ သိချင်ပါတယ်။ဒါကိုစဉ်းစားပြီးရင် ၀င်ငွေ၊အလုပ်သမားခ၊အမြတ် ဘယ်အချိုးရကြရင် မျှခြေဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်မလဲ။ဖြေပေးပါ။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူကလွဲလျင် ကျန်တဲ့အဖိုးအခတွေ ကုန်ကျစားရိတ်အဖြစ် ပြခွင့်ရှိသည်လေ.. တခုတော့ရှိတယ်.. စရိတ်စကနဲ့အတူ ဝင်ငွေလည်း အမှန်တင်ဖို့ လိုသပေါ့။ ပိုင်ရှင်အသုံးစားရိတ်၊ လခပါ ပါသနော်..။ ပေးရကမ်းရတာတွေလည်း ပြမရဆိုပေမဲ့ ဧည့်ခံစားရိတ်၊ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးစားရိတ် ခေါင်းစဉ်တွေ ခွဲတင်တာ အဆန်းမှ မဟုတ်တော့တာ။ လိမ်လျင်လည်း လိမ်မှန်းသိနိုင်သဗျ။ စီးပွားရေးသမားဆိုတာ ငတုံးမဟုတ်သလို ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပရိုတွေကလည်း ငအ မဟုတ်ဖူးဗျ။ ပေးထားကျွေးထားလို့ မျိုစို့ပီးနင်နေလို့ ထုတ်မပြောတာပဲရှိမည်။ ဒီတော့ အဲဒီစားရိတ်တွေကို ခေါင်းစဉ်ခွဲထုတ် ဝင်ငွေနဲ့အချိုးကျ…. သိပါအိဗျာ။ အိပ်ပျော်နေသူကို နှိုးရလွယ်ပေမည့် အိပ်ချဉ်ဟမ် ဆောင်သူကိုဒေါ့ နှိုးလိုမီဗျ…။ အဲဒါလေးတော့ ရှိဒယ်..။
“ကောင်းဖို့ရွယ်သော ခေတ်ကို… အထူးပင် မျှော်မိတယ်….”
ရန်ကုန် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှာ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြမလား စာတင်ပေးမယ်
ဟွာလေ လေးလေးကြောင် ပြောတဲ့ မဲမဲလုံးလုံးနဲ့ ထမင်းထည့်စားရတဲ့ဟာလေးအကြောင်း နည်းနည်းပြောချင်လို့။
အထည်ချုပ်တွေ ဘာကြောင့်ပြတယ် ဘာလို့ပြတယ်တော့ မပြောတော့ဘူး။ အဲ့ အထည်ချုပ်တွေကို ဘာရို့သူတို့က ၀ိုင်းရိုက်တာလဲဟင်… စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ ဥပဒေပါ့ ဆန္ဒပြလို့တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးနော့။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတွေကို နှိုတ်စက်တာတော့ ရှုံ့ချပါ၏။
ဒါနဲ့ ရေခဲမုန့်မစားရလို့ငို၊ စားရပြန်တော့လဲ ချောင်းဆိုးလို့ငို ရေခဲမုန့်စားရဖို့ထက် ငိုရဖို့က အဓိကဖြစ်နေတဲ့ ဟိုကလေးတွေရော ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟင်။
အလုပ်သမားသတ်မက ထဲ ကြောင်လည်း ပါသကိုး
အခြေခံ အလုပ်သမား လစာကိုတော့ သေချာသတ်မှတ်ပေးစေချင်တယ်
ဒီလို ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်တာတဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းများ မရှိတော့ဘူး လား
.ကြောင် ပြေတာ ထောက်ခံပါ၏။ ရွာထဲမှာ ကြောင်ရှိနေတာကိုက ရွာ့တန်ဖိုးတစ်ခု။
အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာဆိုတာ ပုံမှန် ၈နာရီ လုပ်တဲ့အခါ လူတယောက်ရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေး(ထမင်း၂နပ်+မနက်အဆာပြေ+အ၀တ်အစား တွက် ၃လ ကို အခြေခံဝတ်စုံတစုံ+အဆောင်ခ+တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း) ဖူလုံတဲ့ဝင်ငွေရအောင် တွက်ပေးရပါမယ်။
လူတယောက်လုပ်ပြီး ၃ယောက်လောက်ထိုင်စားလို့ရတဲ့ ရှေးခေတ်လိုတော့ မျှော်လင့်လို့ မရပါဘူး။
ပုံမှန် ၈နာရီ လုပ်ခကရတာ အခြေခံစားဝတ်နေရေး ဖူလုံပြီး
အချိန်ပိုလုပ်ခကနေ အပိုစားချင်တာ၊အပိုဝတ်ချင်တာ၊လည်ပတ်ချင်တာ၊လက်ဆောင်ပေးချင်တာ စသည် ရရပါမယ်။
အလုပ်ရှင်+လူမှု ဖူလုံရေးက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးရပါမယ်။
တခုသတိရှိရမှာက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ဟာ အခုမှ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အားယူနေတာပါ။နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်လာဖို့ လုပ်ခလစာ ဈေးချိုတာလည်း ဆွဲဆောင်အားတခုပါပဲ။
ဈေးမချိုချင်ဘူးလား….ရတယ်လေ။ဒီတိုင်းပြည်လို ငွေကြေးကလည်း မတည်ငြိမ်၊ပေါ်လစီကလည်း ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုး၊Infra structure တွေကလည်း ဈေးကြီး၊နေရာတိုင်းမှာ လာဘ်မပေးရင် မရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်သူက လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ။
အခုလည်း ကြီးကြီးမားမား အလုပ်တွေ ဘယ်သူမှ ခြေလာမချပေါင်။
နိုင်ငံခြား သွားလုပ်တယ်လို့ လူကြားကောင်းသေး။
ပညာတတ် လစာကောင်းလို့ သွားလုပ်ကြတာ မြတ်ပါတယ်။
ပညာမတတ်တဲ့ ကလေးတွေ Blue collar တွေ သူများဘာသာ စကားလည်း ရေလည်အောင် မပြောနိုင်ပဲ အနိုင်ကျင့်ခံကြရ၊ငုံ့ခံလာကြရတာ အများကြီး။
အမှန်က အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ဖို့ သင့်နေပြီ။
ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ နီးမှ မဲဝယ်ဖို့ လက်နက်ချန်ထားတယ် ထင်ပါရဲ့။
သတ်မှတ်လိုက်ပြီးရင် စကားများစရာ မရှိတော့ဘူး။
အလုပ်ရှင်ကလည်း မကိုက်ဘူးထင်ရင် ပိတ်သာသွားတော့။
(အခုက အလုပ်သမားကို လိုချင်လွန်းလို့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ တင်ပြီး ခေါ်နေကြတာ၊အလုပ်သမားက ဒီစက်ရုံ ဘယ်လောက်လောက်ရမယ်ဆိုတာ နားထောင်ပြီးမှ အလုပ်ဝင်တာ၊၀င်ငွေ နည်းတယ်ဆိုရင် အင်တာဗျူးတောင် လာမ၀င်ဘူး၊တလ လခနည်းရင် ချက်ခြင်းအလုပ်ပြောင်းကြတာ)ဘယ်နေရာမှာ မျှခြေလွတ်နေတယ်တော့ မသိဘူး။
အာတီဒုံဂျီးလား.. အာတီဒုံ၈ျီးတို့ အုပ်စုထဲကလား တျောက် ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနဲ့ ပတ်သက်ပီး လေပွားကြတော့ ပေါဖူးတယ်ရေ..။ လူတွေက ပေါချောင်တန်ပဲနှိုက်တော့ ပစ္စည်းကောင်းထုတ်လို့ မရ။ ထုတ်လျင် မဝယ်ချင်.. ဒါနဲ့ပဲ ပြည်တွင်းဈေးကွက် မတိုးတက်လို့..။။ ဒီလိုပဲစ်.. လုပ်ခကို အောက်ဈေးနဲ့နှိုက်တော့ ရလာတဲ့အလုပ်က ဘယ်တော့မှ တူတူတန်တန် ဖြစ်မလာစ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ ဆွဲမတင် ဘယ်သူမှ လာမီတင်ပေးစ်။ နယူးယောက်စ်မြို့က ကျောက်တန်းမှာ မြန်တျန့်တွေ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ သူဌေးပေးတဲ့ဈေးနဲ့ ရသလောက် ငုံ့ဝင်ကြတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်ကလည်း ဒီလခ၊ အခုလည်း ဒီလခပဲ.. လူသစ်တွေ ဖြစ်နေပုံ။ ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ကောင်းသလဲ။ ဖဦးထုပ်တို့ကြတော့ မရခင်ဗျ။ သူတို့က မရမလုပ်.. တင်းတင်းပဲ.. ဒီတော့ ပေးကြပြန်ရော။ အပြောအဆို သွက်လက်ချက်ခြာမှုတို့လည်း ဆိုင်သေးတာပေါ့နော်..။ ပြောချဉ်တဲ့ပွိုင့်က ပေးတာလေးနဲ့ကျေနပ်နေလျင် သူဌေးဆိုတဲ့လူမျိုးက ဘယ်တော့မှ လုပ်ခတက်မပေး။ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာ စကားရှိတယ်လေဗျာ.. ရှာသမျှ ဗိုက်နဲ့မဆန့်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်းသွားလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေနဲ့ လုပ်ခကို မနှိမ်ကောင်းဘူး..။ ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံလို မူးတင်းမတ်တင်းနဲ့ လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ဘယ်တော့မှ အကျိုးမဖြစ်.. ကိုယ့်ဆီမှာ အမှိုက်တွေလာပုံသွား.. ကောင်းတာတွေ ပြန်ထုပ်သွားတာပဲရှိသည်။
အခု မြန်မာပြည်အခြေအနေက ခပ်မာမာနေလို့ရတဲ့ အနေမဟုတ်ဘူး။
ပြည်တွင်းမှာ အဆင့်မီကုန်ကြမ်းဘာမှမရလို့ တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုတွေကနေ ပိတ်၊ဇာ၊အပ်ချည်၊သားရေကြိုး၊ဇစ်၊လေဘယ်ကအစ တင်သွင်းနေရတဲ့ အနေ။
အဲဒီတော့ သူများထက်သာတဲ့ ချုပ်ခ မပြောနဲ့ သူများတန်းတူ ဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်ပါ့မလဲ.
ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန် ကြက်သားမပါရင် မစားဘူးလို့ ဘယ်ပြောရဲပါ့မလဲ။
ငါးပိရည်နဲ့ စားရလည်း ခဏ အသက်အောင့်စားထားရမယ့်အချိန်၊
၁၉၆၂ မတိုင်ခင်က ရှိခဲ့တဲ့ ကြက်ဆင်ဖဲထီး၊ဗန္ဓုလစောင်ခေတ်တောင် ပြန်မမီနိုင်သေးဘူး။
၂၀၀၃ US Sanction အပြီး အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ အကုန်နောက်ဆုတ်ကုန်တယ်။ပြည်တွင်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သူတွေ(အရင်းရှင်တွေပဲထားပါတော့) ဘာလုပ်ကုန်လဲသိလား။
ခရိုနီတွေ အထည်ချုပ်လုပ်တယ်များ ကြားဖူးလို့လား။
ဒီလောက်အပေါက်အစများတဲ့အလုပ်ကို ငွေဖြစ်မလွယ်လို့ သူတို့မလုပ်တာပေါ့။
အခုလို နိုင်ငံရေးလွန်ဆွဲကစားနေတဲ့အချိန်မှာ လှုပ်ပေးလို့ အကောင်းဆုံးနေရာက လူအင်အားလည်းရှိ၊ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေပဲ။
မျှတမှု မရှိတဲ့ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုချက်လား၊မျှတမှုရှိတဲ့ တောင်းဆိုချက်လားဆိုတာ ဒေါ်စုဝင်ပါမပါကြည့်ရင် သိသာတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။
ဘာမှလာ​ပြောမ​နေနဲ့ က​ကြောင်​ဂျီး သပိတ်​စုံ သူပုန်​ထ ​နေလည်း မြန်​တျာန့်​ ဆစ်​ တစ်​ပိုင်း အဆိုးမရ က​တော့ ​အေး​ဆေးပဲ ။ ဖုတ်​​လေတဲ့ ငရှိ ပိတယ်​လို့​တောင်​မထင်​ပါဘူး ။ သူတို့ ​ပြောရတာ ဟိုဒင်း ပလာတာ ​ကျွေးရတာထက်​​တောင်​ခက်​​သေး ။ ည​နေက အမ်​အာတီဘီ မှာရှင်း​နေတာက အလုပ်​သမား​တွေက ပဲ မတန်​တဆ ​တောင်း​နေလို့ ကြားဝင်​ညှိရသလိုလို နဲ့ အဲ့ တီဘီ ထပိတ်​ပစ်​က​ရော ။ ဘယ်​ရုပ်​သံ ကိုပဲ ကြည့်​လိုက်​ကြည့်​လိုက်​ အားလုံး​ကောင်းပါတယ်​ ခင်​ဗျာပဲ ။ ရုပ်​သံ သတင်း​တွေမှာ ညစာမစားရ​သေးတဲ့ က​လေးငယ်​မရှိ လယ်​သိမ်းခံရတဲ့ ​တောင်​သူမရှိ သပိတ်​​မှောက်​တဲ့ ​ကျောင်းသား မရှိ မရှိ မရှိပဲ ။ ကျုပ်​​တောင်​ သူပုန်​ထချင်​​နေတာ ​နောက်​လိုက်​မရှိလို့ ။
အဘနီပြောလို့ ပင်လယ်ထဲမှာ ရေလုပ်သားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အကြောင်း ပြောချင်လာတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လ- ၂လ လောက်က အိမ်မဲဘက်ကနေ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်သားအနေနဲ့ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ ရေလုပ်သားတွေ ဖောင်မျောနေလို့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးတဲ့အကြောင်း ဖတ်လိုက်ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ခုရက်ထဲမှာ ပင်လယ်ပိုင်းက တက်လာတဲ့ အသိတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။
ဒီနှစ်မှာ မိုးမကျခင် ရေလုပ်ငန်းတွေ သိမ်းကုန်ကြတဲ့အကြောင်းပြောတယ်။
အမှန်ဆို ရေဆင်းလုပ်သားတွေကို လုပ်ငန်းချိန်မတိုင်ခင် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် လုပ်သားတစ်ယောက်ကို ၅သိန်းကနေ ၇သိန်းကြားပေးပြီး ခေါ်ထားရတယ်။
ရာသီကုန်တဲ့အထိလုပ်မှ လုပ်ငန်းရှင်အတွက် အကျိုးအမြတ်များတယ်။
ဒီနှစ်တော့ ဖောင်မျောတာ ကယ်တယ်ဆိုပြီး ရေမျောနေတဲ့သူမဟုတ်ပဲ ဖောင်ပေါ်မှာ ရေလုပ်သားလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးပြပြီး ခေါ်သွားကြလို့ ရေလုပ်ငန်းရှင်တွေ အလုပ်သမား မရှိဖြစ်ကုန်ပြီး လုပ်ငန်းဆက်မလုပ်နိုင်ပဲ ရပ်ကုန်ကြရတယ်တဲ့။
အဲဒီရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဒီနှစ်အတွက် မိုးတွင်းမှာ ငါးခြောက်ဈေးတက်ပြီး (အခြေခံဖြစ်တဲ့ စားသောက်ကုန်ဈေးတက်တဲ့အတွက်) ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ ပိုများလာမယ်။
ကိုယ်ဥာဏ်မီသလောက်ပြောရရင် တိုင်းတပါးမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ငွေရဖို့တခုတည်းတင်မကဘူး၊
ကိုယ့်အရည်အသွေးကို ပြသနိုင် အသုံးချနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ မြှင့်တင်ရာရောက်တယ်လို့ ယူဆကြပုံရတယ်။
အဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကို ဆရာဦးအောင်ထွန်းသက်လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ရှိတယ် မဟုတ်လား။
လေရဲမိုး အမ တီမားမားကလည်း အဲဒီ ရေလုပ်သားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလောက် မပေးနိုင်လို့ ခိုင်းမရတော့တာပေါ့ဗျာ.. ရှင်းနေတာပဲ။ အဲဒါကို ငါလည်း ပြောတာပဲဆိုလျင် နောက်ကန့်လန့်ကာလေး ဆွဲဖွင့်လိုက်ဦးမဲ.. အပ်ချလောင်း..။ နောက်လုပ်မည့်သူ ရှာလို့မရ.. လုပ်ငန်းတောင် ရပ်သွားတယ် ဆိုကထဲက.. ပရိုအဆင့်ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်… ဒါကို မူးတင်းပဲတင်းပေးခိုင်းတော့ ပိုရတဲ့သူဆီ သွားသူအပြစ်လား.. အောက်ဈေးပေးနှိုက်ခိုင်းသူ အပြစ်လား။
အန်တီမမ ပြောချင်တဲ့ ရေလုပ်သားတွေက ကယ်ဆယ်ခြင်းခံရပြီးတော့ ငွေထုတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ကို အတွေ့တောင်မခံကြတော့တာ။
ပေးထားတဲ့ အသုံးစားရိတ်ကို ထိုင်စားပစ်ချင်ကြာတယ်လို့ ပြောချင်တာ။
အခြားပိုပေးတဲ့ အလုပ်တူကို သွားလုပ်တာမဟုတ်။
ကမောက်ကမ အစိုးမရနဲ့ အချောင်ပဲလိုချင်တဲ့ အလုပ်သမားကြားမှာ ညပ်သွားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ တကယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြတာပါ။
ကယ်ဆယ်ရေးဆိုတာ ဖောင်ပျက်ပြီး ရေထဲမှာ မျောနေတဲ့သူတွေကို ဆယ်တာကို ခေါ်တာ။
ခုတော့ သူ့ဖာသာ ဖောင်ပေါ်မှာ ငါးဖမ်းနေတဲ့ လုပ်သားတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးဆိုပြီး (လူများများ ကယ်တင်တယ် ဖြစ်ချင်တော့) ကယ်သွားတော့ တရာသီစာ လုပ်အားခပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဆုံးရှုံးကြရတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးထဲ ရေလုပ်သားအများကြီး ပါသွားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင် လုပ်ငန်းဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။
ရာသီကုန်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ ယူထားတဲ့ငွေကို ရာသီကုန်တဲ့အထိမလုပ်လို့ဆိုပြီး ငွေပြန်အမ်းတဲ့ရေလုပ်သားမရှိဘူး။
တရားမျှတမှုရှိအောင်ဆိုရင် အဲဒီကိစ္စ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်သလဲ မစ္စတာကြောင်ကြီး ဖြေပေးပါ။
အဲဒိ ယေလုတ်ငမ်းရှင် ဝင်ငွေခွံ ဗယ်လောက်စ် စောင်ထားလဲ သိဝူးနော် လေရဲမိုးအမျိုး တီမားမား..။ အယေးယူမပေးလို့ဂဒေါ့ အနော်သာစို အခွံစောင်ထားတဲ့ ချလံဖျက်ပိုင်း ပြပီး ဗပြောင်သမီး တပ်ကြံပစ်မှာ..။
-အခုချိန်ထိ မိဘလုပ်စာ ခိုကပ်စားပီး..လစာကောင်းကောင်းရမှ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သံဒိတ်ထန်နဲ့
-ဒီကြားထဲ နိုင်ဂံဂျား ထွက်သူအရေအတွက်ကလဲ တိုးနေတာဘဲလေ..
-လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဂလောက်နည်းနေချိန်မှာ..ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးမှုနဲ့လဲ ကြုံနေရသေးတယ်
-ဘာလို့ မကျွမ်းကျင်ကျလဲ ဆိုတော့..အိုက်လိုမျိုး ဟိုပြောင်းဒီရွှေ့နဲ့..ဘာမှ မယ်မယ်ရရမတတ်တော့လို့..
-ဘွဲ့ရပညာတတ်ဆိုရင်တောင်..သင်ထားတဲ့ပညာက ခပ်ပိန်းပိန်း..ရှေ့ဆက်တက်ဖို့လဲ -မလေ့လာနိုင်တော့..ပဆံထွက်ရှာ..အိုက်တော့..အသိဥာဏ် ခပ်ပိန်းပိန်း နဲ့ အလုပ်သမားတွေ တိုးလာရော
-ဒါ့ကျောင့်လက်ရှိ ပညာရေးစနစ်ကိုသာ သပိတ်မှောက်သင့်ပါတယ် (အထင်)
ကိုယ့်ပိုစ့်သာဆိုရင် ရွှေအိကို စိမ်းပေးလိုက်ချင်တယ်။
ဘုန်းကြီးတွေလည်း.. လုပ်ခနဲ့.. နာရီစားသတ်သတ်မှတ်မှတ် သတ်မှတ်ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့..
ခရစ်ယန်တွေ.. ဂျူးတွေမှာကျ.. မင်္ဂလာဆောင်ဘိသိတ်.. ဘယ်လောက်..
ကလေးကင်ပွန်းတပ်. ဘယ်လောက်.. စသဖြင့်ရှိပြီးသား..။
သား၃သားမှာ.. ဘုရားသားတွေရဲ့.. သပိတ်သပိတ်.. ထ.. ထ…။
ဟား ဟား သူဂျီး ​နောက်​ကျသွားဘီ ။ ဘုန်းဘုန်း​ဒွေမှာလဲ သတ်​မှတ်​ချက်​ရှိသပါ့ဗျာ ။ ဘယ်​ ကိုယ်​​တော်​ တရားပွဲ တစ်​ည ပင့်​ရင်​ ဓမ္မ ပူဇာ ဘယ်​​လောက်​မှ လိုက်​တယ်​တို့ ။ ဆွမ်း​ကျွေး တရားနာပင့်​ရင်​ အလှူ​ငွေ မများ​လောက်​ဘူးထင်​ရင်​ တစ်​​ကျောင်းထဲက ကိုယ်​​တော်​ ကိုယ်​စားလွှတ်​လိုက်​တာတို့ ဘာတို့ ။ ​နောက်​ ပြီးခဲ့ တဲ့ လက ကြားလိုက်​ရတာရှိ​သေးဗျ ။ ရှစ်​ရက်​သီတင်း ဥပုတ်​​လာ​စောင့်​တဲ့ ပရိဿတ်​ကို လှူ ဖွယ်​ပစ္စည်း ယူမလာဘဲ ပိုက်​ဆံပဲ လှူဖို့ ​ပြောတဲ့ ဘုန်​ကြီး​ကျောင်း​တောင်​ ​ပေါ်လာဘီ ။
သူများ FB က မလာတာပါ။
အထည် ချုပ် စက် ရုံ အလုပ်သမ တွေ ရ ပိုင် ခွင့် အတွက် ဆန္ဒ တွေ ပြ သပိတ် တွေ မှောက် တာ တော့ တော် တန် ရုံ လုပ် ရင် မ ဆိုး ပါ ဘူး။
သိပ် အ ကဲ ဆတ် လွန်း ပီး အလကား နေ သပိတ် မှောက် နေ ရင် ရေရှည် မှာ ဒီ အလုပ် သမား ထု ပဲ ပြန်ထိ မယ်။
မ ကြာ ခန ဖြစ် နေ တဲ့ သပိတ် တွေ ကြောင့် ခု ဆို USA နဲ့ EU က အထည် ချုပ်တွေ မြန် မာ မှာ စက် ရုံ လာ ဖွင့် ဖို့ မစဉ်း စား ကြ တော့ ဘူး။
လက် ရှိ ဖွင့် ထား တဲ့ CMP စက် ရုံ တွေ အထည် ချုပ် တွေ လဲ ခန ခန ဆန္ဒ ပြ ထုတ် လုပ် မှု့ တွေ ခန ခန ရပ် ။ ဝယ် လက် ကို ကုန အပ် ဖို့ ကတိ တွေ ပျက် လျော် လာ ကြ ရ တော့ အ ရေး ကြီး အထည် order တွေ မြန် မာ စက် ရုံ တွေ မှာ မ ထုတ် ရဲ ကြ တော့ ဘူး။ မြန် မာ မ ဟုတ် တဲ့ တခြား နိုင် ငံ က သူ တို့ စက် ရုံ င်္ခွဲ တွေ ကို ပဲ order ချ ကြ တော့ တယ်။
အထည် ချုပ် တွေ ပြန် အလုပ် ဖြစ် လာ တော့ အိမ် တွေ မှာ အိမ် ကူ အိမ် ဖေါ် ရှာ ရ အရမ်း ခက် လာ တယ် ။ တော က တက် ပီး အောက် ကျ ခံ အိမ် ဖေါ် ဘယ် လုပ် မ လဲ ။ အထည် ချုပ် သွား လုပ် မှာ ပေါ့။ ရွာ ပြန် လဲ ပြော ရ တာ ဂုဏ် မင ငယ် ဘူး။
အ နှိပ် ခန်း တွေ KTV တွေ မှာ လဲ အရင် လို မိန်း က လေး တွေ ဖေါ ချင်း သော ချင်း မ တွေ့ ရ တော့ ဘူး။ ဝမ်း သာ စရာ ပဲ။
အရင် Sanction ကြောင့် မြန် မာ က ရုပ် ပီး Bangladesh ရောက် သွား တဲံ အထည် ချုပ် စက် ရုံ တွေ ခု ပြန် လာ ဘို့ ရှိ တယ်။
တရုပ် မှာ အ ခြေံ ခံ လုပ် သား ခ မြင့် လာ လို့ မကိုက် တော့ တဲ့ တရုပ် စက် ရုံ တွေ လဲ မြန် မာ ကို လာ ဘို့ စဉ်း စား တယ်။
စပရက်စ လီ ကျွန်း ပိုင်း ဆိုင် မှု့ တရုပ် နဲ့ ဗီ ယက် နံ ရေ တပ် ချင်း ပြ သနာ ဗီ ယက် နံ မှာ တရုပ် စက် ရုံ တွေ မီး ရှို့ ခံ ရ တော့ မြန် မာ ကို ရွှေ့ ဘို့ စဉ်း စား ကြ တယ်။
ရေ ခန ခန ကြီး လို့ ဘန် ကောက် စက် ရုံ တွေ မြန် မာ မှာ နေ ရာ လာ ရှာ ကြ တယ် ။
ဒီ စက် ရုံ တွေ အား လုံး ဝင် လာ ရင် မြန် မာ မှာ လုပ် သား မ လောက် လို့ စက် ရုံ တ ခု နဲ့ တ ခု လုပ် သား ကို ဈေး ပြိုင် ပေး ခေါ် ကြ ရင်း လုပ် ခ လစာအ လို လို မ တောင်း ပဲ မြင့် မှာ ပဲ။ ဈေး ကွတ် သ ဘော တရား ပဲ။
ခု တော့ ဘာ စက် ရုံ မှ ဟုတ် တိ ပတ် တိ မဝင် ရ သေး အလုပ် က မ လုပ် ရ သေး အ ခွင့် အ ရေး က အရင် တောင်း။ ဘယ် သူ မှ ဝင် မ လာ ရဲ အောင် စွတ် ရွတ် လုပ်။
မြန် မာ က လူ တွေ က ကြောက် ရင် လဲ သူ များ ထက် ကြောက် တယ် ။ ပြူး ရင် လဲ သူ များ ထက် ပြဲ တယ်။
အနှိပ် ခမ်း တွေ KTV တွေ လူ ပြန် စည် လာ မှာ မြင် ယောင် တယ်။ိ
မြန်မာတွေက.. ဘိုနေ၀င်းကြီးရိုက်သွင်းသွားတဲ့.. ဆိုရှယ်လစ်လေလုံး အမိများနေကြတယ်လို့.. ပြောချင်မိတယ်..။
အလုပ်သမား.. လယ်သမား.. အခြေခံလူတန်းစားတွေဟာ.. တိုင်းပြည်တခုမှာ အရေးပါပေမယ့်… (အရေးပါပေမယ့်).. ငွေရှင်.. ကြေးရှင်များလောက်… ဦးစားကား..မပေးသင့်..။
အစိုးရဆိုသူတွေဟာ.. လူထုအသံနားထောင်မယ်ဆိုရင်.. ဓနရှင်..ငွေရှင်တွေအသံကို.. ဦးစားပေးနားထောင်ရမယ်.. နားထောင်သင့်တယ်… လို့.. ဆိုလိုရင်းပါ..။
အလုပ်သမားထုအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်တဲ့ အရင်းရှင်တွေကြောင့် ကူမြူ နစ်ဝါဒ ပေါ်လာတယ်၊ ပဋိပက္ခဖြစ်တော့ တိုးတက်တယ်.. အကျိုးဆက်အားဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး တိုးတက်လာတယ်.. တပါထဲ တွဲလိုက်လာတာ လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီရေး။ ဖိနှိပ်လွန်းတဲ့အခါ အုံကြွမှု ဖြစ်ကိုလာတယ်.. ဒါ နိယာမ တခုပဲ။ အရေးတခုမှာ လူတွေ စွန့်စားပါဝင်မှု များပြီဆိုလျင် ခံစားချက် ကြီးကြီးမားမား ရှိနေလို့ပဲ။ ဘယ်သကောင့်သားမှ အလုပ်ပြုတ်၊ အဖမ်းခံ၊ ဘဝပျက်သွားမှာနဲ့ လဲပြီး အချောင်လခတိုးဖို့၊ ထိုက်သင့်တာထက် ပိုတိုးဖို့ မတောင်းဘူး။
စပ်ဆက်လို့ (မစပ်လည်းဆွဲထည့်ဒယ်ကွာ.. lee ဖြစ်လား) မွတ်ဆန့်ကျင်ရေးကြတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒ မဟုတ်လားဆို ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်လို့လည်း မဘသ ဒီလောက် သက်ဆိုးရှည်နေတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စစ်တပ်နဲ့ဖွတ်ပါတီကသာ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုမထားပေးလျင်၊ အလုပ်သမားတွေကို ဗပြောင်အစိုးမရ နှိပ်ပ်ကွပ်သလို နှိပ်ကွပ်မည်ဆို ဒင်းရို့ ဆန္ဒပြရဲမလား၊ လေကျယ်ရဲမလား သံသယရှိအိ။
စစ်တပ်က အတိုက်အခံကို ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်လုပ်ယဉ် အာဏာပျံသိန်းမဲနဲ့ ခြိမ်းခြောက်သယ်၊ မျိုးခြစ်အရည်ခြုံဖွတ်တွေက ဒီမိုသမား လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တိုင်း မွတ်တွေပါတယ် ခြောက်လှန့်ဒယ်၊
အရင်းရှင်တွေကြတော့ အလုပ်သမားကို ထမင်းငတ်မယ် fာဖြစ်သွားမယ် ကြိမ်းမောင်းဒရယ်…။
ဒီဒေါ့ သပ်ထုခြလျင် စစ်ကောင် = မျိုးခြစ်အယောင်ဆောင် = အရင်းရှင် (ရွာထဲက)
ရမ်ငှာစီး ပျတ်ကျဗာ…. ကျောင်းသား၊ အလုပ်သမား၊ မြေသိမ်းခံလယ်သမားနဲ့ ရွှေဝါရောင်ဘုန်းကြီးတို့စ်
(တော်ရာချောင်မှာ ကုတ်ချောင်း ကုတ်ချောင်း )2
သောင်းပြောင်းစုံလို့ မြှောက်ထိုးကလော် ……
( ရွှေပြည်တော်ကို မီးရှို့ဖို့ ကြိုးစား ) 2
သူ့လုံခြုံရေး သူကာကွယ် ………
( လေကွယ်ရာက နှာချေတယ်ဗျ )2
ဟတ်ချိုး ဟတ်ချိုး ကြောင် ဏှာချေ ………
( မဒီတွေရေ … ရှောင်ကြ ရှားကြ ) 2
ရပ်ရွာဆူမှ သူအိပ်ပျော် ……
( သပိတ်စုံစုံ သဘုန်ထ ဆိုဘဲ ) 2
ဦးကြောင်ကြီးမှ မေတ္တာဝေ ……
( မြန်တျန့် ပြည်သူတွေ ကွန်မြူနစ်ဖြစ်ဖို့ ) 2
ဒီလောက် မွှေတဲ့ ကိုကိုကြောင် ………
( လျှာတစ်တောင်လောက် ရှည်ပါစေသား .……
.ဒီပို့စ်ထဲ ခဏခဏ ၀င်ဝင်ဖတ်နေမိတယ်။ ကွန်မင့်တွေ အကုန်လုံးကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ မှန်နေတယ်လေ။ တရုတ်သဌေးကြီး တစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ဘယ်တော့မှ မလုပ်နဲ့တဲ့။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာပဲ လုပ်တဲ့။
.ကျမ တို့လည်း လုပ်ငန်းသေးသေးလေး တစ်ခု လုပ်ဖူးတာပေါ့။ အဲဒါ အလုပ်သမား ဒုက္ခပေးတာနဲ့ ပြုတ်တာပဲ။ အလုပ်သမားဆိုတာ အချိန်တန်ရင် အလုပ်ရှင်ကို နိုင်ပေါက်ကိုင်တယ်။ အလုပ်ရှင် ကိုယ်တိုင် ၀င်မလုပ်နိုင်မှန်း သိရင် ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် သူတို့ လူပါးဝတော့တာပဲ။ ရက်ချိန်းအတိုင်း ပေးရမယ့် ကိစ္စမှာ အော်ဒါပျက်သွားအောင် ၊ နှစ်ဖက်စလုံး မိတ်ပျက်ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ မရတော့အောင် တမင်ကို သူတို့ လုပ်ကြတယ်။ အလုပ်သမား ဒုက္ခပေးလို့ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေ ပြုတ်သွားတာ အများကြီး။ ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ၊ ဒါက လုပ်ငန်းသေးသေးလေးဆိုတော့ အကြီးနဲ့ ဘယ်တူမလဲ။ လုပ်ငန်းကြီးမှာကတော့ ဒီလိုဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စကို ကြိုတင်ရှင်းထားနိုင်တဲ့ မန်နေဂျာမျိုးနဲ့ လူအများစုအတွက်ကြည့်မယ့် စိတ်သဘောလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးလို့ဆိုပြီး အလုပ်သမားက သူ့အခွင့်အရေးကို ထပ်တိုးဖို့ မတောင်းရင် နှစ် ၁၀၀ လုပ်လည်း ဒီအဆင့်က တက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သမားတွေ ဒီလောက်အများကြီး လူညီနေတယ်ဆိုကတည်းက တစ်ခုခု တော့ မဟုတ်တာ ရှိလို့ပေါ့။ မဟုတ်ရင် သူတို့ လူ ဘယ်ညီမလဲ။ ဒါကြောင့် ကကြောင် ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ်။
ဒီမိုရွာရဲ့ထုံးစံအတိုင်း သဘောထားချင်းမတူလည်း ငြိမ်းချမ်းပွင့်လင်းစွာပြောဆိုနိုင်လို့
ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်သဘောထားကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တနိုင်ငံလုံးမပြောနဲ့ လုပ်ငန်းတမျိုးတည်းမှာတောင် အလုပ်ရှင်တစ်ယောက်ထဲရှိတာ မဟုတ်ဘူး။
ဆိုလိုချင်တာက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေ အချင်းချင်းလည်း လုပ်သားလုတဲ့ပြဿ နာရှိတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းချင်းတူတူတောင် လုပ်သားတွေအနေနဲ့ လုပ်ခလစာပိုရတဲ့ဆီကို ပြောင်းကြတယ်။
ဒါ့အပြင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကပေးနိုင်တဲ့ လုပ်ခထက်ပိုရတဲ့လုပ်ငန်းရှိရင်လည်း အဲဒီပြောင်းကြတာပဲ။
ခုနောက်ပိုင်း ပညာတတ်တတ် မတတ်တတ် နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်ကြတာတွေ၊ အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေဆိုရင်လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက အထည်ချုပ်တွေကို ပြောင်းသွားကြတာတွေ တပုံကြီးပဲ။
ကျမသဘောနဲ့ဆိုရင် အလုပ်သမားတွေကို ဘာဖြစ်လို့ ဆန္ဒတွေပြနေကြမလဲ။
ဆန္ဒပြမယ့်အစား ပိုကောင်းတဲ့ ပိုရတဲ့အလုပ်ရှိရင် ပြောင်းကြတာ ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ အကြံပေးချင်တယ်။
ဘယ်လုပ်ငန်းမဆို လုပ်ငန်းရှင်က အလုပ်သမား မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး။
အဲဒီတော့ လက်ရှိလုပ်ခထက်ပိုပေးပြီး ဆက်လုပ်နိုင်ရင်လုပ် (စရိတ်ပိုများလို့ ဈေးတက်လို့ရရင်ပေ့ါ)၊
ဒီလိုမှမရဘူးဆိုရင် တွက်ခြေမကိုက်ရင် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်း၊ သူ့ဖာသာ စဉ်းစားတွက်ချက်လိမ့်မယ်။
လေရဲမိုးအမ တီမားမား ပြောဒါ မင်းတို့ အာဏှာလိုခြင် ရအောင် တိုက်ယူလေကွာလို့ ဒီမိုသမားကို စစ်ကောင်ပြောဒဲ့ လူမိုက်စဂါးနှဲ့ တူတူဗဲ..။ ဒါမှ မီဟုတ်… သိပ်ဒီမိုလိုခြင် တိုင်းပြည်မှာ မနေနဲ့ အခြားနိုင်ငံသွားလို့ ဖွတ်ကောင် ပြောဒါနဲ့လည်း ထူးမခြား..။ အယ်မယ်လေးလေ့.. ရောင်းဖို့ကြတော့ ကွာလတီ ပရောဒက် မဝယ်ဂျလို့ အပြစ်ဆိုလားဆိုရဲ့.. ပေးရမည့် အလှည့်ကြတော့ မသေယုန်ဆားရ တော်ပေါ့ဒဲ့…
တကယ်ပြောရရင် အလုပ်ရှင်တိုင်း အမြတ်ကြီးစားတာ မဟုတ်သလို
ဒီဆန္ဒပြတာတွေက အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားပိုင်တဲ့ စက်ရုံတွေ မှာ အဖြစ်များတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေက ကြားခံ အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းက မျှတအောင် မလုပ်တာကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့တိုးတောင်းတဲ့ လစာကလည်း မျှတဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရုံအလိုက် နေ့စားခ၊အထည်ကြေးစသည် တိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုသင့်ပေမယ့် လူတယောက် ၃သောင်းတိုးရမယ်။အလုပ်လာဆင်းတာနဲ့ တနေ့ ၅၀၀၀ ပေးရမယ်၊ ၇၀၀၀ ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးကြားနေရတာတော့ မသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။
ဘွဲ့ရတဲ့သူတွေတောင် မရနိုင်တဲ့ လုပ်အားခတွေပါ။
စက်ရုံမဟုတ်တဲ့ အပြင်အလုပ်တွေမှာ အလုပ်ရှာသူတွေကိုမေးကြည့်ပါ။
တနေ့ ဘယ်နှုန်းရကြသလဲလို့။(ဘီအေ၊ဘီအက်စီဘွဲ့ရလစာကို မေးပါ)
အလုပ်သမားတွေဒီလောက်အများကြီး ညီနေတာ တခုခု မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းရှိရမယ်ဆိုလို့….
မြန်မာတပြည်လုံး ရပ်ကွက်တိုင်း ညီနေတဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ လမ်းပိတ် အားကစားပွဲများကိုရော မှန်တယ်ထင်ပါသလား။
ဂေါက်နေတဲ့ မန်းဂဇက်မန်ဘာတွေပဲ မကြိုက်တာပါ။
လူညီရင် ဤကိုကျွဲဖတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်တခု ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာ တဆင့်ချင်းသွားရပါတယ်။
ပထမ ကိုယ်လိုချင်တာကို အလုပ်ရှင်၊ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ဆွေးနွေးရပါတယ်။
အဲဒီအဆင့် ဖြေရှင်းတာကို သဘောမတူကြမှ ဆန္ဒပြခွင့်ရှိပါတယ်။
အခုသိရသလောက်တော့ အဲဒီအဆင့်တွေကို ကျော်ပြီး အရင် လူစုဆန္ဒပြအလုပ်မလုပ်၊သပိတ်တားဆိုတာတွေ ဖြစ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ မီဒီယာကိုလည်း မျက်စိမှိတ်မယုံကြပါနဲ့။
ဖွဘုတ်ပေါ်မှာ ကိုယ်လိုရာဆွဲ ရေးတာတွေလည်း အမှားကမ္ဘာတွေပါ။
လုတ်ခြလိုက်ပျံပီ.. ခိုနီ အာတီဒုံဂျီးကဒေါ့…။ အလုပ်သမား ဒီအလုပ်သမား ပြသနာကို မနေ့တနေ့ကမှ ဖြစ်သီမဟုတ်.. နှစ်နဲ့ချီနေပြီ.. ဗပြောင် မဲလိင်မဲခိုးပီး သမဒတက်လုပ်ခထဲက။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ဆွေးနွေးပြီးတာ အကြိမ်ကြိမ်.. အလုပ်သမားဝါဏိဇ္ဇရုံးမှာ ဖြေရှင်းတာ မရေတွက်နိုင်တော့၊ ကြားက အရပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့စည်းတွေ ဝင်ဖြေရှင်းပေးတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီလဲ.. နောက်ဆုံး လွှတ်တော်ထဲမှာတောင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်ခ အုပဒေတင်ထားဒါ ခြစွဲနေပြီ။
ကျန်သွားလို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ဦးမဲ… အထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေ လုပ်ငန်းခွင်က ပင်ပန်းတယ်၊ ဆင်းရဲတယ်။ ဘွဲ့ရခါစလေးတွေလို စားရေးစာချီ အရောင်းမဟုတ်ဘူး။ ကျနော် ငယ်ငယ်က စာရေးလေး လုပ်ဖူးသယ်.. လခက တွက်လျင် အလုပ်ကြမ်းသမားလောက်တောင်မရ။ အတော်မကြေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ ငါလို ဘွဲ့ရမည့်ကောင်က သူတို့လောက်တောင် မရလားလို့။ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်ပင်ပန်းပုံခြင်း မတူဘူးလေ..။ အာတီဒုံဂျီး ပြောတဲ့ ဗွဲ့ရခါစ လူတွေကို အထည်ချုပ်မှာ လုပ်ခိုင်းကြည့်ပါလား… တဗက်လောက်.. ပီးဒေါ့မေးလိုက် အဲလိုလခမျိုး အဲဒီမှာလုပ်ရမည်ဆို လိုချင်သေးလားလို့..
အယ်မီလေး ကောင်းဂျသေးယဲ့လား အရက်ဒဂို့.. မြန်တျန့်အလုပ်သမားဒွေ အဖျစ်ကို ဆာနှာဂျဗာအုံးစ်။။ လေရဲမိုးအမ တီမားမားနဲ့ ခရိုနီ အာတီဒုံဂျီးဒို့ဂဒေါ့ မလုပ်ချဉ်ထွက်သွားဓဲ့… ခွီး။
မြန်မာအလုပ်သမား လစာက ကမ္ဘာ့အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေ
လုပ်ခလစာ နည်းပါးတာတွေက ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ မတည်ငြိမ်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆို (Credit: ABC)
မြန်မာ ​နိုင်ငံက ​အလုပ်သမားတွေရဲ့ ​လုပ်အားခလစာဟာ ​ကမ္ဘာ့အနှိမ့်ဆုံး ​ဖြစ်တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။
Verisk ​Maplecroft’s ​Labour ​Costs ​Index ​လို့ခေါ်တဲ့ ​အလုပ်သမားခ ​ညွန်းတမ်းမှာ ​ဖော်ပြထားတာပါ။
အဲဒီ ​ကုမ္ပဏီက ​နိုင်ငံပေါင်း ​၁၇၁ ​နိုင်ငံရဲ့ ​အလုပ်သမားလစာတွေ၊ ​အလုပ်သမား ​ဥပဒေတွေ၊ ​လူမှုအထောက်အပံ့တွေကို ​ကြည့်ပြီး ​အဆင့် ​သတ်မှတ်ပေးတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ ​မြန်မာ ​အလုပ်သမားတွေဟာ ​ကမ္ဘာ့ဈေးအပေါဆုံး ​အလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်လို့ ​ဖော်ပြထားပြီး ​အောက်ဆုံးက ​အဆင့် ​၁၇၁ ​မှာ ​ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာ ​အလုပ်သမားတွေ ​နီးပါးလောက် ​လုပ်အားခ ​ဈေးပေါတဲ့ ​နိုင်ငံတွေကတော့ ​ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ​ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်အားခ ​လစာနည်းတယ်ဆိုတဲ့ ​တရုတ်နိုင်ငံကတောင် ​အဆင့် ​၆၄ ​မှာ ​ရှိပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက ​အလုပ်သမားတွေရဲ့ ​ပျမ်းမျှ ​လစာက ​တစ်လကို ​အမေရိကန် ​ဒေါ်လာ ​၄၅၀ ​ရှိပေမယ့် ​မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ​အမေရိကန် ​ဒေါ်လာ ​၁၀၀ ​တောင် ​မပြည့်ဘူးလို့ ​ဆိုပါတယ်။ ​သြစတြေးလျနိုင်ငံက ​ပျမ်းမျှ ​လစာကတော့ ​ဒေါ်လာ ​သုံးထောင်ကျော်ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ​မြန်မာအလုပ်ရှင်တွေက ​အလုပ်သမားတွေရဲ့ ​လူမှုအထောက်အပံ့တွေ ​ပေးစရာ ​မလိုဘူးလို့လည်း ​ဆိုပါတယ်။ ​လုပ်အားခ ​အရနည်းတာတွေနဲ့ ​လူမှုထောက်ပံ့ကြေးမရခြင်းရဲ့ ​ဆိုးကျိုးကတော့ ​အလုပ်သမားတွေနဲ့ ​သူတို့ ​မိသားစုအတွက် ​ကျန်းမာရေးနဲ့ ​လူမှု ​ဖူလုံမှု ​နည်းပါးတာတွေ၊ ​လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ​အခြေအနေ ​ဆိုးတာတွေ ​ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ​ဆန္ဒပြမှုတွေ၊ ​မတည်ငြိမ်မှုတွေ ​ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ​ပြောပါတယ်။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ​ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ​လုပ်အားခ ​လစာနည်းတဲ့အတွက် ​ပြည်ပက ​ကုမ္ပဏီတွေ ​ရင်းနှီးမြုပ်နှံလို့ ​အလုပ်အကိုင် ​များပြားလာနိုင်တယ်လို့ ​ပြောပါတယ်။ ​အနောက်ဥရောပ ​နိုင်ငံတွေရဲ့ ​လုပ်အားခက ​ဈေးများပြီး ​အီတလီနဲ့ ​ပြင်သစ်နိုင်ငံကတော့ ​အလုပ်သမားခ ​ဈေးအများဆုံး ​ဖြစ်ကြောင်း ​ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခုဆို ပြည်တွင်းမှာ အလုပ်သမားရှားပါးတဲ့ ပြဿ နာကို နေရာတိုင်းမှာ တွေ့နေရတယ်။
ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကျေးလက်တောရွာတွေက လူငယ်လူရွယ်တွေ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းကို အလုပ်သွားလုပ်ကုန်ကြတယ်။
လယ်သမား ကိုင်းသမားတွေ လူငှားရှာမရလို့ လယ်ပိုင်ရှင်အချင်းချင်း သူ့လယ် ကိုယ်ဝိုင်းလုပ်၊ ကိုယ့်လယ် သူဝိုင်းလုပ် လုပ်ကြရတယ်။
ဒါလည်း သူ့သဘာဝနဲ့သူ မျှခြေထိန်းသွားတာပဲ။
.ကကြောင် ပြောတာ ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံတယ်။ လုပ်ခလစာ အောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်အောင် လုပ်တာ လူ့အဆင့်ကိုပါ ချတာ။ တီမမ နဲ့ တီဒုံ တို့က လုပ်ငန်းရှင် သဌေးတွေဆိုတော့ သဌေးအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းကြမှာပေါ့။ တီမမ ပြောသလိုဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့လည်း တူတူတန်တန် လစာမပေးချင်ရင် အလုပ်ပိတ်သိမ်းပြီး ပြန်ကြတော့။ ပြည်တွင်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်မှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှာ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်အောင် အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ နေလို့ရတဲ့ စနစ်ကို ဖော်ဆောင်ထားရမှာ။ မြန်မာပြည်မှာ အသေးမွှားဆုံး အခွင့်အရေးကလေးကိုတောင် မဟားဒရား တိုက်ယူမှ ရတာ။ အသေးမွှားဆုံး လူ့အခွင့်အရေးလေးရဖို့၊ အသေးမွှားဆုံး မိသားစုဝင် အခွင့်အရေးလေး ရဖို့ ရေကုန်ရေခန်း တိုက်ယူမှ ရတာ။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒပြတာ ထောက်ခံတယ်။ မျှစ်ကိုယ်တိုင်လည်း မိသားစုဝင် အခွင့်အရေးလေး တစ်ခု သေးသေးကလေး ရဖို့အတွက် အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းခဲ့တာ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းကတော့ လူအများကြီးနဲ့လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးလည်း မဟုတ်တော့ ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်သားတွေက ဒီအလုပ်မှာပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ (ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး) ကြာနေကြပြီဆိုတော့ သူလည်း ကိုယ့်အကြောင်းသိ၊ ကိုယ်လည်း သူ့အကြောင်းသိမို့ ဟိုဘက်ဒီဘက် မျှခြေမိနေတယ်ထင်တာပဲ။
ဟုပ်မ မီလား လေရဲမိုးအမ တီမားမား.. အနော်ပေါဒါ မီယုန်.. သူဒို့ ထမင်းစားနေတဲ့နေရာ အသန်ဖမ်းစပ် ခိုးတပ် နားထောင်ကြိပါရား…။
အသံဖမ်းစက်နဲ့ ခိုးနားထောင်စရာ မလိုဘူး။
သူတို့မကျေနပ်ဘူး မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ကတောင်းပန်ပြီး ဆွဲထားရင်တောင် အမြီးတောင် မြင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကြောင်တကောင်လုံးမြင်ပြီးမှ ဘာလို့ ကြောင်မြီးလိုက်ရှာနေမလဲ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားဆိုတာ ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ကျွန်းကိုင်းမှီပါ။
အလုပ်ရှင်ကလည်း သူတို့လုပ်ပေးလို့ ငါဝင်ငွေရတယ်ဆိုပြီး ရတာတွေ ကိုယ်ချည်းမယူပဲ ပေးသင့်သလောက် ခွဲဝေပေးရမယ်။
အလုပ်သမားကလည်း သူတို့ အလုပ်ပေးလို့ ဒို့စားဝတ်နေရေးပြေလည်တယ်ဆိုပြီး မခိုမကပ်လုပ်ရမယ်။
အပြန်အလှန် ကတညုတ=သူ့ကျေးဇူးကိုလည်းသိရမယ်။ ကတဝေဒီ=အဲဒီကျေးဇူးကိုလည်း တတ်သရွေ့မှတ်သရွေ့ပြန်ဆပ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။
အဲဒီတရားတွေ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ လွတ်လာတဲ့အခါ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်ရတာပဲ။
ဒါက စဖြစ်တဲ့ စက်ရုံတွေရဲ့ အခြေအနေ။
ဒါပေမယ့် အလုပ်သမားမှန်သမျှ သူများလစာတိုးတယ်ကြားရင် ကိုယ်လည်း တိုးချင်တာပဲ။
အခုပဲ အစိုးရက သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကို တိုးပေးမယ်ကြားတော့ အပြင်မှာ မျှခြေဖြစ်ပြီးသားသူတွေကလည်း တိုးလိုချင်တာပဲ။
လွှတ်တော်အမတ်တွေ ၁၀သိန်းတိုးယူတာက အဓမ္မ။
ပြည်သူပိုင်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲကယူတာ အများပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် တာဝန်ခံပေးရတဲ့သူမရှိဘူး။ခေါင်မိုးမရှိဘူး။တက်လို့တိုက်မယ့်နေရာမရှိဘူး။
အခု အလုပ်သမားတွေ တလ ၃သောင်းတိုးတောင်းတာက တာဝန်ခံပေးရမယ့်သူရှိတယ်။ခေါင်မိုးရှိတယ်။
ဒါ့အပြင် အခြားပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်းတွေ အားလုံးလည်း တိုးလိုချင်ကြတော့မယ်။တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားတွေကြားမှာ မပြေလည်မှုတွေဖြစ်ကြတော့မယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ရှင်တွေမှာ တိုးပေးစရာ ခေါင်မိုးတိုက်လုပြီ။
ဒီဖက်နှစ်တွေမှာ ခရိုနီတွေကလွဲရင် အသေးစားအလုပ်တွေ ပြုတ်ကုန်ပြီ။
အဲလိုအချိန်မှာ ထမင်းကို နပ်မှန်မှန်စားရရင် ကျေနပ်သင့်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ များလာတဲ့အခါ (ဒီမိုအစိုးရဖြစ်တဲ့အခါ)ကိုယ်ကခေါင်းခေါက်ပြီး အလုပ်ရွေးလုပ်နိုင်ပါပြီ။ခဏလေး ရွေးကောက်ပွဲပြီးအောင် မစောင့်နိုင်ကြတော့ဘူးလား။
ဒီနှစ်ရဲ့ အခြေအနေကို ပြည်ပကလူတွေ ထန်းပင်ပေါ်ကလူတွေ သိအောင်ပြောပြချင်တယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနှစ်ထူးထူးခြားခြား သီးနှံတွေ အထွက်ဆုတ်တယ်။ပိုးတအားဖျက်တယ်။
ကြွက်တွေ ၀ါးသုဉ်းရာက သီးနှံဝင်ဖျက်လို့ ပဲခင်းတွေ ပျက်တယ်။
အဲတော့ လယ်စားရိတ်ဝင်ထားတာနဲ့ မကိုက်ဘူး။သူတို့ ၀ယ်ထဲ့ရတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေး၊ဒီဇယ်စသည်ဈေးကြီးတယ်။
ပြည်ပကလည်း ဈေးကောင်းမပေးနိုင်ဘူး။ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလည်း ကျနေတယ်။တချို့မီးဖိုချောင်သုံးကုန်တွေဆိုရင် အင်ပို့တောင် ပြန်ဝင်ကုန်တယ်။ငရုတ်ကြက်သွန်စသည်။ကြာတော့ လယ်သမားတွေ သီးနှံစိုက်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲ။ကုန်ကြမ်းလည်းမရှိ၊ကုန်ချောလည်း မထုတ်နိုင်၊သယံဇာတလည်း ကုန်ပြီ။လူတွေလည်း ပညာတတ်ရော ပညာမတတ်ရော အကုန်ထွက်ကုန်ပြီ။
အဲလို အချိန်မှာ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံတွေ ခေါ်တဲ့ အထည်ချုပ်(CMP လက်ခစားစနစ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ)နဲ့ တိုးရစ်ဇင်ဟာ တိုင်းပြည်ကို ကယ်မယ့်အားတွေပါ။ဒါတွေကို အစိုးရက ထောက်ပံ့ရမယ်။ Subsidize လုပ်ရမယ်။ Privilege ပေးရမယ်။အခုတော့……
မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတာ.. ခြေချတာနဲ့ ဒေါ်လာ ၁သန်းလောက်က.. အိမ်..ရုံးခန်းငှားစရိပ်နဲ့တင်.. ပလုံပလုံ…။
ဆန္ဒလေးများပါပြကြမယ်ဆို… ရင်းနှီးမြုတ်နှံသူတွေ.. မြန်မာပြည်ကို.. ဆာယိုနာရပဲ..။
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. နိုင်ငံခြားကလွှင့်ပစ်တဲ့ကားကို.. မြန်မာပြည်မယ်. ဒေါ်လာ ၁သိန်းလောက်တန်အောင်လုပ်ပစ်တဲ့..လုပ်တတ်တဲ့..ဦးနှောက်ရှင်..။
မြေဈေးကို.. ဒေါ်လာသိန်းသန်း.. ကမ္ဘာတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပစ်တဲ့.. စာဖတ်နေသူကြီး…
ဒါစို နိုင်ငံဂျားက လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ကုန်ကျစားရိတ်ကို အချိုးချကြည့် စို့လေ.. စီအိုင်အေအူးမာမွတ်။ အလုပ်သမားခ ထောင်းလို့ လံပြေး ကုန်သလား။ စုစုပေါင်းကုန်ကျစားရိတ်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ရှိရင် အဲဒီအလုပ်က စက်အဓိကသုံးအလုပ်လား၊ လူအဓိကသုံး အလုပ်လား ခွဲလိုက်။ ပြန်ထွက်လာတဲ့ ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးနဲ့ အချုိးပြန်ချကြည့်။ ဘယ်လောက် ပြန်ဝင်သလဲ.. အဲဒီမှာ အချိးထပ်ချ ကြည့်..။ သတ္တိရှိလျင် အစစ်ခံလေဗျာ။ အခုတော့ ဂျိုးပြောမိုးပြော..
မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး ဆန္ဒပြ အေဂျင်စီ ဖွင့် မလို့ တဲ့။ အသိတစ်ယောက် က။
ဘယ်လို ဆန္ဒပြ ဆိုတာ ကို သင်တန်းပေးမတဲ့။
အလံတွေ၊ တီရှပ်တွေ ၊ ဆိုင်းဘုတ် တွေ ဒီဇိုင်း လုပ်ပေးမတဲ့။
သွားရမဲ့ လမ်း တွေ ၊ ထိုင်ရမဲ့ နေရာ တွေ ရွေးပေးမတဲ့။
လူလိုရင် အားဖြည့် ပေးမတဲ့။
သူပြောတာကို ရီရခက်၊ ငိုရခက်။
အလုပ်သမား ဆန္ဒပြတာ ကတော့ စာချုပ် နဲ့ ခန့်ထားခဲ့ရင် လခ ဘယ်လောက် ဆိုတာ စာချုပ်ထဲ ပါရမှာဘဲ။ ဒီ စာချုပ် ကို ဘယ်သူ ဖောက်ဖျက်နေလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရင် ပြီးတာ ကို ဘာ ရှုပ် နေတယ်မသိ။
စာချုပ်မရှိဘဲ ခန့်ထားတာ စာချုပ်မရှိဘဲ လုပ်နေတာ ဆိုရင်တော့ နှစ်ဖက်လုံး အလွန်ပါ။
မြန်မာပြည် မှာ အမှန်တရား ဖြစ်သင့်တဲ့ ဘက် က ရပ်ဖို့ အားနည်းကြတယ် ထင်ရဲ့။
အခုဟာ က ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ကို ကြည့်ပြီး ဆင်းရဲ ရင် ဘဲ သနားဖို့ ကောင်းပြီး မှန် တယ် ဆိုပြီး ပင်းဖို့လဲ မသင့်ပါ။
ချမ်းသာသူ ကိုလဲ မှန်တယ် ဆိုပြီး ဖားဖို့လဲ မသင့်ပါ။
ကျောင်းသား ဆိုတိုင်းလဲ အားပေးမယ် မဖြစ်သင့်။
အစိုးရ ဆိုတိုင်း လဲ ခေါင်းငြိမ့် မည် မလုပ်သင့်။
ဘွားဒေါ်ဂျီးကိုသာ ဆိတ်နဲ့မေတ္တာပို့နေပါ တီတီလာဘ်ရာ…။ ဗေးကင်းယံကွာ ရှိဗာအိ။
တီတီလတ်ကို စိမ်းပေးရေး ဒို့အရေးးးး ဒို့အရေးးးးး
(ပို့စ်ပိုင်ရှင် ကကြောင်ကြီးကို ဆန်ဒပြကြွေးကြော်သံ) :boss: